कृषि विकासको समाजवादी मार्गचित्र- विविधा - कान्तिपुर समाचार
प्रकृति र मानव समाजको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई उन्नत बनाउने दृष्टिकोणबिना भविष्यका लागि कृषि जोगाउन सम्भव छैन ।
असार २७, २०७५ कृष्णप्रसाद पौडेल
काठमाडौँ — खेती हाम्रो संस्कृति हो । धानको बिउ छर्नेदेखि दाइँसम्म धानखेती गर्ने सबै समुदायमा अनेक उत्सव मनाउने चलन थियो र अहिले पनि छ । अहिले नेता तथा सरकारी हाकिमहरूले यसलाई झनै रमाइलो बनाउने गरेका छन् । नेता र सरकारी हाकिमलाई असार १५ को धान रोपाइँ दिदीबहिनीको तीजजस्तै ठूलो चाड बनेको छ ।
तर यिनको हिलोमा पस्ने प्रचलन भने १५ वर्षमात्र पुरानो हो । कृषि सपार्न सिन्को नभाँच्ने मन्त्रालयका हाकिमको उक्साहटमा यो नयाँ प्रचलन थपिएको हो । धान दिवस सँगसँगै ओरालो लागेको कृषिक्षेत्र निरन्तर खस्किँदो छ । यस वर्षमात्र २६ अर्बको चामल आयात भएको छ । यो सरकारको समग्र कृषि विकासको झन्डै ६० प्रतिशत बजेट बराबर हो । कृषिजन्य उत्पादनको आयात २ खर्ब हाराहारी पुग्दैछ । यो कुल वार्षिक बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।
हुन त हिजोआज कृषि क्षेत्र बिग्रेकामा चिन्ता र चासो पनि निकै बढेको छ । यो एक अर्थमा अहिलेको परनिर्भर कृषि र यसले निम्त्याएको खाद्य सङ्कटको सम्बोधन गर्दै नेपाली समाज दिगोपनातिर लम्कन यो सबैभन्दा राम्रो अवसर हो । यो हाम्रो वातावरणीय विनाश र प्राकृतिक सम्पदाको तीव्र दोहनले परेको नकारात्मक प्रभावलाई उल्टाएर प्रकृति र समाजलाई पुन:स्थापना गर्ने ठूलो मौका पनि हो । अहिले यो सच्याउन ढिला गरे हामी फर्किन नसक्ने ठाउँमा पुग्छौं । त्यतिबेला पछुताउनुको कुनै अर्थ हँुदैन ।
वाम गठबन्धन अर्थात अहिलेको नेकपाले १० वर्षमा मुलुकलाई प्रांगारिक बनाउने घोषणा गरेसँगै कम्तीमा नेपालको कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि कस्तो कृषि प्रणाली अपनाउने भन्ने बहस सतहमा आएको छ । तर यसतर्फ कुनै सार्थक पाइला भने अझै चालिएका छैनन् । सरकारको नेतृत्व समृद्धिको सपना बाँड्ने भाषणको खेतीपातीमै व्यस्त छ । तर नेपालको दीर्घकालीन कृषि विकासका सोच र लिइएका रणनीति कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा एक किसिमले विपरीत दिशातिर दगुरिरहेको छ भन्नेसम्म पनि यस सरकारले भेउ पाएको देखिँदैन ।
मुख्य कुरा हामी कस्तो प्रणाली अपनाएर कृषिको दिगो विकास गर्छौं भन्ने नै हो । अब प्रकृति र मानव समाजको अन्तरसम्बन्ध र सहअस्तित्वलाई उन्नत बनाउने कृषि विकासको दृष्टिकोणबिना भविष्यका लागि कृषि जोगाउन सम्भव छैन । हुन त अहिले कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने नाममा उच्च लगानीको व्यापारिक कृषि गर्ने वा स्थानीय स्रोतको उपयोगबाट साना किसानद्वारा गरिने पर्यावरणीय अर्थात जैविक खेतीपाती भन्ने बहस चलिरहेको छ । तर अझै पनि स्थानीय जैविकतामा आधारित साना तथा मध्यम आकारको खेती प्रणाली कसरी आत्मनिर्भर र दिगो कृषि अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्छ भन्ने कुराको पर्याप्त बहस भने हुनसकेको छैन ।
समग्रमा, हाम्रो विशेषतामा कस्तो विकासको ढाँचा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराको दिशाबोध गर्न जरुरी छ । यसो नगरी अरुको नक्कल गर्न खोज्दा अहिलेसम्म कृषि, भूमि लगायत अन्य क्षेत्रको सुधारको व्यावहारिक मार्गचित्र बनाउन नसकेको हो । अर्को कुरा, हाम्रोजस्तो विविधतापूर्ण भौगोलिक तथा पर्यावरणीय अवस्थामा कृषिको विविधीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तुलनात्मक कृषिको प्रवद्र्धन गर्नुको विकल्प छैन । किनकि ठूला परिणामको र पुँजीप्रधान प्रविधि अपनाइएको अहिलेको भारत वा चीनको जस्तो एकल खेती प्रणाली हाम्रो कृषिको बाटो हुनै सक्दैन । यी उपजले उनीहरूका कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् ।
सँगै, यो तथाकथित आधुनिक भनिने कृषि प्रणालीका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ, रासायनिक मल, किटनाशकसमेत बाहिर (भारत वा चीन) बाट आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा यस्तो कृषि प्रणालीको वकालत गर्नु भनेको नेपाली कृषि डुबाउने राष्ट्रघाती कुकर्म हो । अहिले विस्तारै खनिज इन्धनको अनन्त आपूर्तिको मृगतृष्णामा वृद्धि, प्रतिस्पर्धा र उपभोगमा आधारित ‘आधुनिक आर्थिक समाज’भन्दा कृषिप्रधान, न्यून–इन्धन, सहकारी जीवनशैली धेरै दिगोपनसम्मत छ भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । यो कुरा हाम्रो बिगत र अहिले पर्यावरणीय तथा जैविक कृषि अपनाउने किसान, समुदाय, क्षेत्र र क्युबाजस्ता देशले प्रमाणित गरेका छन् ।
उन्नतिको मूल आधार कृषिक्षेत्र रूपान्तरण नगरी यो मुलुक फेरिँदैन । यसका लागि, भूमिसुधार पहिलो सर्त हो । संसारभरिको अनुभव केलाउने हो भने मुख्यत: कृषि उत्पादन र कृषि उद्योग उन्नत बनाउन भूमिसुधार गरिएको तथ्य फेला पर्छ । यसको सुधारले समतामूलक समाज बनाउन सघाउँछ । मुख्यत: कस्तो कृषि प्रणाली अपनाउने भन्नेले नै भूमिसुधारको कस्तो ढाँचा अपनाउने भन्ने निर्धारण हुने हो । यही कुरा सल्ट्याउन नसक्दा नेपालको भूमिसुधार कुइरोको काग बनेको छ । नेपालमा भूमिसुधारको कुरा गरेकै ५५ बर्ष काटेको छ । भूमिलाई सम्पत्तिका रूपमा मात्र बुझ्ने र यसको न्यायोचित वितरण भन्दै आश्वासनको खेतीमात्र गर्ने राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको प्रवृत्तिले यो सवाल यति धेरै गिजोलिएको छ कि अब यही कुरा दोहोर्‍याएर नेपालमा कुनै पनि प्रकारको भूमिसुधार नै गर्न सकिँदैन । भूमिको सुधार नगरी कस्तो समाजवादी समृद्धि आउँछ ? यसको जवाफ पनि आउला नै । समाजवादी समाज निर्माण गर्ने हो भने यो कुराको निक्र्योल नगरी अगाडि बढ्न सकिँदैन ।
दोस्रो, नेपाली अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनिले किसानको सहकारी खेती प्रणालीको मेरुदण्ड हो । नेपालभरि २६ हजारभन्दा बढी सहकारी छन् । त्यसमध्ये कृषि सहकारी ४ हजारभन्दा बढी भएको बताइन्छ । तर अझै पनि यी सहकारी प्रभावकारी हुन नसकेका मात्र हैनन्, कतिपय यस्ता सहकारी बिचौलियाका ठगी केन्द्रका रूपमा समेत चिनिन्छन् । यिनको प्रभावकारी नियमनसँगै कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरणमा यिनको परिचालन गर्न जरुरी छ ।
तेस्रो, कृषि क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान, खोजी र यसको प्रसार कृषि विकासको प्राण हो । कृषि सपार्न शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारको ठूलो भूमिका हुन्छ । तर अहिले हाम्रा विश्वविद्यालयहरूमा शोधपत्र त अरुको सारेर बुझाइन्छ भने अनुसन्धान गर्ने त कुरै भएन । कृषि विश्वविद्यालय र कृषि संकायहरू पनि यसका अपवाद हैनन् होला । श्क्षिा र अनुसन्धान नै नभएपछि केको प्रसार गर्ने ? अहिलेको समीक्षा गरी यिनको पुन:संरचना नगरी कृषिक्षेत्र अघि बढाउन सकिँदैन ।
चौथो, संसारभरि नै आधारभूत शिक्षाक्षेत्र परम्परामा धानिने रोगबाट ग्रस्त छ । तुलनात्मक रूपमा नेपालको यो क्षेत्रको अवस्था झनै दयनीय छ । आधारभूत शिक्षा सुधार गरी विद्यालयदेखि नै कृषिबारे पढाउने कुरा र बालबालिकालाई खेतबारीमा अभ्यास गर्न लगाउने जस्ता काम नगरी कृषिप्रतिको बुझाइ फेर्न र किसानीलाई सम्मानित पेसा बनाउन सकिँदैन । यो क्षेत्र सुधार गर्न कुनै कुराले छेक्दैन, बहानाले बाहेक । माथि उल्लिखित विषय अघि बढाउन अहिलेकै संरचनाबाट सम्भव छैन । फरक ढंगले काम गर्न फरक सोच, प्रक्रिया र संरचना चाहिन्छ । यसको सुरुवात भने अहिलेको नेतृत्व आफै फेरिएर मात्र सम्भव छ । प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:४१
इंग्ल्यान्डविरुद्ध क्रोएसिया : स्वर्णिम पुस्ताको लय
असार २७, २०७५ राजु घिसिङ
मस्को — इंग्लिस प्रिमियर लिग विश्वकै सर्वाधिक लोकप्रिय घरेलु फुटबल भएर पनि विश्वकप इतिहासमा इंग्ल्यान्डको प्रदर्शन गतिलो छैन । त्यसैले उसलाई रुसमा पनि बलियो मानिएको थिएन ।
त्यसमाथि गारेथ साउथगेटको टिम युवा खेलाडीले भरिएको छ । त्यसैले अहिलेको रुस यात्रालाई इंग्ल्यान्डको चार वर्षपछि कतारमा हुने विश्वकप जित्ने अभियानको सुरुआत पनि भनिएको थियो । ती सबै अनुमान गलत सावित गर्दै इंग्ल्यान्ड ५२ वर्षपछि विश्व फुटबलको सर्वोच्च प्रतियोगिताको फाइनल यात्रा पक्का गर्ने संघारमा आइपुगेको छ ।
इंग्ल्यान्डले सन् १९६६ मा घरेलु भूमिमा जर्मनीलाई हराएर पहिलोपल्ट विश्वकपको उपाधि जित्दा क्रोएसिया स्वतन्त्र देश पनि भएको थिएन । त्यसको एक वर्षपछि स्वतन्त्र भएको क्रोएसियाविरुद्ध इंग्ल्यान्डले बुधबार मस्कोस्थित लुजनिकी रंगशालामा विश्वकप सेमिफाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्दै छ । ज्लात्को डालिचले सम्हालेको क्रोएसिया पहिलोपल्ट फाइनल पुग्ने अभियानमा छ भने इंग्ल्यान्ड दोस्रोपल्ट सेमिफाइनलभन्दा माथि उक्लिने योजना बुन्दै छ ।
सेन्ट पिटर्सबर्गमा अभ्यासरत इंग्लिस फुटबल टोली
अन्त्यतिर गोल बेहोरेपछि इंग्ल्यान्डले अन्तिम १६ मा कोलम्बियालाई पराजित गर्न टाइब्रेकर सहारा लिनुपरेको थियो । उसले क्वाटरफाइनलमा भने स्वीडेनलाई सजिलै हराएको थियो । पहिलोपल्ट फाइनल पुग्ने अभियानमा रहेको क्रोएसियाले भने अन्तिम १६ मा डेनमार्क र क्वाटरफाइनलमा आयोजक रुसलाई पराजित गर्न पेनाल्टी सुटआउट कुर्नुपरेको थियो ।
कप्तान ह्यारी केनप्रेरित इंग्ल्यान्डले हरेक खेलमा सुधार गरिरहेको छ । क्रोएसिया भने समूह चरणमा लियोनल मेसी नेतृत्वको अर्जेन्टिनामाथि ३–० को जित रचेयता फेरि उस्तै लयमा देखिएको छैन । त्यसैले दोस्रो सेमिफाइनलमा सफलताको हकदार इंग्ल्यान्डलाई मानिएको छ । तर रियल म्याड्रिडका लुका मोड्रिच र बार्सिलोनाका इभान राकिटिच मिडफिल्डमा फेरि छाएमा इंग्ल्यान्डलाई क्रोएसियाली आक्रमण झेल्न भने गाह्रो पर्नसक्छ ।
बलका साथ रहिम स्टर्लिङ
टोटेनहम हर्टस्परका फरवार्ड
ह्यारी केन सर्वाधिक ६ गोलसहित गोल्डेन बुटको होडमा अगाडि छन् । तर उनले स्वीडेनविरुद्ध सामरामा भने गोल थप्न सकेनन् । अग्रपंक्तिमा इंग्ल्यान्डका हतियार उनी नै हुन् । प्रशिक्षक साउथगेटले निरन्तर पहिलो रोजाइमा अवसर दिइरहेका रहिम स्टर्लिङले गोलको खाता खोल्न नसके पनि विपक्षी डिफेन्सलाई दबाब राख्ने गरेका छन् । डेले अली, जेसी लिङगार्डको प्रदर्शन पनि निरन्तर खारिँदै आएको छ ।
सेन्टरब्याक जोन स्टोन्स र ह्यारी मगाएर यो विश्वकपको बलियो जोडीको रुपमा देखिएका छन् । उनीहरूलाई छिचोल्दै जोर्डन पिकफोर्डको पोस्टमा गोल गर्न क्रोएसियाली फरवार्डलाई सजिलो हुनेछैन । तर, युभेन्ट्सका अनभुवी फरवार्ड मारियो मान्जुकिचलाई कमजोर ठान्ने भूल इंग्ल्यान्डले गर्ने छैन ।
क्रोएसियाली टिम नकआउटका दुवै खेलमा २–२ घण्टा खेलेकाले थकित हुनसक्छ । तर उसको मुख्य चिन्ता डिफेन्समा हो । डेजान लोभरेन र डोमागोज भिडालले सेन्टरब्याकमा गरिरहेको कमजोरी सच्याउन सके क्रोएसियाले ह्यारी केन नेतृत्वको आक्रमणलाई रोक्न सक्छ ।
विश्वकप पूर्वसन्ध्यामा सर्वाधिक सफल ब्राजिल, डिफेन्डिङ च्याम्पियन जर्मनी, पूर्वविजेता फ्रान्ससँगै बेल्जियम, स्पेनलाई उपाधि दाबेदार मानिएको थियो । बलिया टिमको त्यस सूचिमा इंग्ल्यान्डलाई राखिएको थिएन । ‘हामीले रुसमा निरन्तर सुधार गरेर राम्रो खेलिरहेका छौं,’ विश्वकै उत्कृष्ट डिफेन्डरका रूपमा देखिएका इंग्ल्यान्डका जोन स्टोन्सले भने, ‘सबै खेलाडीले दुई वर्षयता मिहिनेत गरिरहेका छन् । साउथगेट (प्रशिक्षक) ले त्यसैअनुसार टिमलाई आत्मविश्वासी बनाएको छ । त्यसैले हामी यो (सेमिफाइनल) भन्दा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छौं ।’
प्रिमियर लिग विश्वकै लोकप्रिय लिग भएर पनि इंग्ल्यान्डले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा कमजोर प्रदर्शन गरिरहेको अवस्था चिर्दै युवा टिमले रुसमा सेमिफाइनल तय गरेको हो । खेलाडीको परिपक्व खेललाई प्रिमियर लिगको अनुभवले दिलाएको सफलताको रूपमा लिइएको छ । विश्वकपमा २८ वर्षपछि अन्तिम चारमा पुगेको यो टोलीलाई इंग्ल्यान्डको स्वर्णिम पुस्ताको रूपमा पनि लिइएको छ ।
क्रोएसिया सन् १९९८ मा विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुगेको थियो । त्यतिबेला लिलियम थुरामको दुर्लभ दुई गोलको सहयोगमा आयोजक फ्रान्सले अन्तिम चारमा क्रोएसियालाई २–१ ले हराएको थियो । त्यस यात्राको उपलब्धिलाई उछिन्दै मोड्रिचको टिम रुसमा फाइनल खेल्ने अभियानमा छ ।
क्रोएसिया टोली ।
इंग्ल्यान्ड र क्रोएसियाको तथ्य
इंग्ल्यान्ड र क्रोएसिया आपसमा आठौंपल्ट खेल्न लागेका हुन् । विगतका भेटमा इंग्ल्यान्डले ४ खेल जितेको छ भने क्रोएसियाले २ खेलमा सफलता पाएको छ । एक खेल बराबरीमा सकिएको छ । पछिल्ला सातमध्ये ६ खेल वेम्बलीमा भएको थियो ।
इंग्ल्यान्ड र क्रोएसिया यसअघि मुख्य प्रतियोगितामा एकपल्ट भेटेका छन् । सन् २००४ को युरोपियन च्याम्पियनसिपको समूह चरणमा इंग्ल्यान्डले ४–२ को जित निकालेको थियो ।
इंग्ल्यान्डले विश्वकप सेमिफाइनल तेस्रोपल्ट खेल्न लागेको हो । सन् १९६६ मा उपाधि जित्ने क्रममा उसले अन्तिम चारमा पोर्चुगललाई २–१ ले हराएको थियो । तर १९९० मा भने उसलाई सेमिफाइनलमा जर्मनीले पेनाल्टीमा पराजित गरेको थियो ।
क्रोएसियाका आठ खेलाडीले विश्वकप २०१८ मा गोल गरेका छन् । यसभन्दा बढी बेल्जियमका ९ खेलाडीले गोल गरेका छन् ।
इंग्ल्यान्डले सन् १९८२ यता एउटै विश्वकपमा दुई युरोपेली टिमलाई हराएको छैन । त्यतिबेला भने इंग्ल्यान्डले चेकोस्लोभाकिया र फ्रान्सलाई पराजित गरेको थियो ।
विश्वकप २०१८ यात्रा
प्रकाशित : असार २७, २०७५ ०८:३४